Haze feminized mbeu | MyWeedSeeds.com
Zvibereko: kusvika 16oz | 450g m2
Kureba: kusvika 98.5in | 250cm
THC nhanho: med / yakasimba 10% kusvika 15%
Haze mbesa zvirimwa ndiko kuyambuka kwekutanga Jamaican sativa uye Skunk (zvishoma kuyambuka). Iye anonyanya kuzivikanwa kuve iye akanakisa mbanje pasi rose, asingadzivisike kunyangwe akanyanya jaded mbanje connoisseur. Iye nehama dzake dzakapunzika vanoonekwa pamusoro pedzimba dzeAmsterdam dzinonyanya kusarudza kofi. Tichabvuma kuti Haze inogona kunge iri dambudziko rembesa mbanje kuti ikure, asi hunhu hwayo hunomuita kuti akoshe zviripo. Miti yehuze yakachenuruka, yakareba uye ine huswa. Makumbo ake emakumbo anoburitsa mashizha matete uye akareba, akavezwa mabhuru egoridhe. Iye anozivikanwa neyakagara iri pamusoro THC ratio, saka mabhureki ake anogona kunge ari madiki, asi iwo ane simba. Kana ichibvumidzwa nzvimbo yakakwana kuti ikure, inogona kuve hombe uye kuburitsa goho rinoshamisa. Hwema hweHaze hwakaoma kunzwisisa - hunodzika kubva pane pefiyumu inonhuhwirira pasi kusvika kune yakasviba yematehwe hunhu. Haze mbanje inowanzoonekwa nekuda kwesimba rake rakakwirira. Inounza inenge psychedelic yakatsemurwa kunze mhando. Iye isarudzo yakanaka kwazvo yekushandisa zvikonzero zvekurapa, kana uine humwe hunyanzvi hwekukura mbanje. Isu hatikurudzire ichi Haze chirimwa kune wekurapa novice murimi.